ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने
२३ भाद्र, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट बैंकले कुनै पनि डिमार्टमेन्टल स्टोर, मार्ट, होटल, पसल लगायतका मर्चेन्टहरुबाट मेशिनमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकसँग कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले मर्चेन्टहरुबाट Point of sale (POS) मसिनमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकसँग शुल्क लिन नपाइने सूचना जारी गरेको हो ।
सूचनामा यदि कुनै मर्चेन्टले कारोबार रकम बाहेक अतिरिक्त शुल्क लिएमा कारोबारको बिल र भुक्तानी रसिद सहित कार्ड जारी गर्ने संस्थामा सम्पर्क राख्न अनुरोध गरिएको छ ।
बढी आय हुने क्षेत्रमा बढी राजश्व उठाउँछौँ – अर्थमन्त्री
१२ माघ, काठमाडौँ । सरकारले बढी आय हुने क्षेत्रमा राजश्व…
आजको सेयर बजार २१ अङ्कले ओरालो तर्फ
१२ माघ, काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से…
लगातार उकालो लाग्दै सुनको मूल्य, कति पुग्यो त प्रतितोला ?
कति छ त आजको विदेशी मुद्राको भाउ, हेर्नुहोस् कु्न घट्यो कुन बढ्यो ?
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको महानिर्देशकमा तिवारी
आज पनि उकालो लाग्दै सुनको मुल्य , कति पुग्यो त प्रतितोला ?